Nagu saabsan - Nanjing Zhitian Mechanical And Electrical Co., Ltd.
NANJING ZHITIAN wuxuu ku takhasusay soo saarista qaybaha beddelka ah ee mataanaha maroojiyeyaasha ah. Marka waayo aragnimo ka badan 20 sano. Soo saarida sanaadiiqda, foostooyinka iyo walxaha mashiinka mashiinka mataanaha ah.Waxaan sidoo kale ku siineynaa adeegga dib u habeynta loogu talagalay sanduuqyada iyo foostooyinka.
Shirkaddayda oo leh xoog farsamo oo xoog leh, qalab wax soo saar aad u fiican, tikniyoolajiyad wax soo saar oo casri ah, nidaamka kormeerka adag iyo adeegga iibka kaamil ah, oo ay ku amaanan yihiin macaamiisha. Maaddaama alaabada shirkaddaydu ay ahaayeen codsi bislaaday Leistritz, Coperion, Berstorff, JSW, Toshiba, Jwell, Steer iyo noocyo kale oo caan ah.
NANJING ZHITIAN waxaa la aasaasay 2006. Waqtigaas aaga aqoon isweydaarsigu wuxuu ahaa qiyaastii 1000m2, Kaliya shan shaqaale ah, Taasi waxay ahayd kahor ganacsiga shisheeye, dhammaan wax soo saarka waxaa loo sameeyay suuqa gudaha.
Sannadkii 2014, aagga aqoon isweydaarsiga waxaa loo ballaariyay 5000m2, Tirada shaqaaluhu waxay u kordheen 50, Waxaan aasaasnay ​​R & D team iyo kooxda Suuqgeynta, waxay kobcisay ganacsiga caalamiga ah. Sannadkan, macaamiil badan oo cusub ayaa nala soo xiriiraya, waxaan sidoo kale sii wadnaa caawinta iyo taageerida macaamiil aad iyo aad u tiro badan si ay u galaan dharbaaxo waxyaabaha beerta.
In 2017, Waxaan ku darnay qalab processing, sida 4 mashiinada CNC, 2 mashiinka qodista godka qoto dheer, 1 baaraha saddex-cabbir iyo wixii la mid ah. Sannadkan dhexdiisa, macaamiil duug ah oo aad u badan ayaa ku sii celcelinaya amarrada annaga.
2018, aaga aqoon isweydaarsiga waxaa loo balaariyay 10000m2, dhismayaasha xafiisyada waa 700m2, Tirada shaqaalaha wey korortay ilaa 90. Sidoo kale waxaa la ballaariyay kooxda iibka ilaa 6 qofood oo la kulmaya usbuuc walba, si loo buuxiyo tirada amarka kordhaysa iyo sare u qaadista heerka adeega ee macaamiil kasta. . Waa diyaarin wax ku ool ah tallaabadayada xigta ee horumarka.
Sannadkii 2019-kii Maajo, waxaan ka qayb-galnay Bandhigga 'CHINAPLAS Guangzhou Exhibition' oo ah 33-jeer si loo sameeyo marxalad lagu soo bandhigayo heer caalami oo heer caalami ah oo xirfadlayaal xirfadeed ah, Bandhiggan, markii ugu horreysay ee STD & HTD Gearbox, sidaa darteed macaamiil aad iyo aad u tiro badan ayaa ka yimid Shiinaha iyo suuqyada shisheeyaha ayaa bilaabay inay ogaadaan anaga
Dhammaan ZT waxay fiiro gaar ah u leeyihiin tallaabo kasta oo faahfaahin ah, waxaan rajeyneynaa foojarka horay u wada socda adiga!